Ọnọdụ ọhụrụ nke Purificación García maka oge okpomọkụ | Bezzia
Maria onyekwere | 29/04/2021 18:00 | Kedu ihe m ga-eyi
N'etiti oge oyi anyị chọpụtara ntakịrị nhụchalụ nke nke ugbu a nchịkọta nke Purificación García. Nchịkọta SS21 dị oke obosara nke anyị na-achọpụta ọhụụ atọ nke ụlọ ọrụ ahụ. Nwere ike ịma ihe ha bụ site na foto mkpuchi?
Ikekwe ị chepụtara ha. Nke mbụ nwere agba dị ka onye na-akwado ya; kpọmkwem, a miri emi na agba mmanụ. Ndị fọdụrụ na-ezo aka na ụdị mbipụta abụọ: mbipụta nkewa akara na nke ahịhịa botanical ma ọ bụ floral. Trendszọ atọ dị, ọ bụghị naanị na nchịkọta ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Spanish.
2 Ihe ọnyá
3 Ifuru Mbipụta
Ọ bụ ihe ijuanya na ịchọta oroma na-ese foto na mkpokọta Purificación García. Anyị na-ahụ ya n'ime iberibe ihe osise dị ka uwe na-enweghị uwe na-enweghị aka na uwe ogologo na-agba agba yana akwa, nnukwu akpa na akụkụ. Ma kwa uwe ndị dị larịị dịka jaket a na-edoghị edozi nwere akara ọgịrịga buru ibu na fringes ma ọ bụ jaket akpụkpọ anụ faux. Uwe ndị ụlọ ọrụ ahụ anaghị ala azụ ijikọta na ndị ọcha ndị ọzọ.
Uzo kwụ ọtọ na nke kwụ ọtọ, ọnya dị larịị na nke gbara ọkpụrụkpụ ... Otú ọ dị, ha niile nwere otu àgwà, A na-eweta ha na oji na ọcha. Na mbipụta a, ị ga-ahụ uwe mgbokwasị, uwe ogologo ọkpa na jaketị nwere okpukpu abụọ na akwa mmanụ a honeyụ na pinstripe. Ọ bụ ezie na ọ ga-abụ na ọ ga-abụ sket midi na-acha uhie uhie na jaket owu nwere ọtụtụ ọnya ga-adọta uche gị nke ọma.
Nke mbu botanical, na-enwu gbaa ma na otutu. Nke abụọ Ifuru na nwa ọcha na-acha odo hues. Already nweela ọkacha mmasị gị? Uwe mkpuchi balloon a na-egbutu na naịlị ejiri aka ya gbaa gburugburu na uwe midi na grained crepe nwere uwe aka dị mkpụmkpụ na uwe mwụda balloon bụ ọkacha mmasị anyị nwere mbipụta botanical.
N'etiti ndị nwere nwa na acha ọcha na ifuru ebipụta Uwe ejiji dị mkpirikpi na uwe ogologo ọkpa na-emetụta anyị karịsịa, ma na crepe yana nkọwa piping iche. Ọ bụ ezie na anyị achọghị ịkwụsị ịkọwa jaket bọmbụ n'ihi na ọ nwere ike bụrụ ezigbo enyi iji mezue uwe dị iche iche n'oge ọkọchị.
Pur nwere mmasị na amụma Purificación García maka oge ọkọchị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Kedu ihe m ga-eyi » Ọnọdụ ọhụrụ sitere na Purificación García maka oge ọkọchị